Ogadentoday Press » Diridawa: Diridawa: Shaki ka dhashay Burburka Diyaarada Wasaarada Gaashaandhiga Itoobiya
Diridawa: Shaki ka dhashay Burburka Diyaarada Wasaarada Gaashaandhiga Itoobiya
Ogadentoday Press: Diyaarad Militari oo ah nooca sida tooska ah u kaca ayaa ku bur-burtay Gobalka Shawa. Diyaaradan ayaa ka soo kacday Magaalada Diridawa waxayna u socotay Saldhiga ugu weyn Ciidamada Cirka ee ku yaala Magaalada Debresiet.
18 qof oo ahaa dhamaan Dadkii saarnaa 15 yihiin Saraakiil Ciidan ayaa ku dhintay. 3 kalle ayaa ah Haween Iyo Caruur ka mid ahaa xasaaska Saraakisha.
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay in baadhitaan ku jirto sida Warggaysa Borkena uu sheegay waxaa kaloo jira tuhun ay qabaan Wasaarada Gaashaandhiga oo dhanka ammaanka Saraakiisha sarre soo wajahay. Illa lau kalsoon yahay ayaa sheegaya in 6 ka mid ah ahaayeen duuliyayaal sarre.
In ka baddan 146 Shaqaalaha koontaroola socdaalka Diyaaradaha ah ayaa shaqo joojin sameeyay. Wasaarada duulista ayaa sheegtay inay Shaqaalihii horre ee howlgabka la soo celin sidoo kalle dalal kalle shaqaale laga soo qoran doono. Waxaa kalloo warar ku darayaan in cabsi laga qabo in Diyaaradan arrin laga danbeeyay tahay.
Inta la ogyahay waa burburkii muddo 15 sanno ah ku yimaada Diyaarad Militari